IMEX Ameerika waxay Mustaqbalka u Eegtaa Ujeedo iyo Wanaagsan
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » IMEX Ameerika waxay Mustaqbalka u Eegtaa Ujeedo iyo Wanaagsan
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Wararka Mareykanka
Tirinta ayaa socota! IMEX America waxay furmaysaa dhowr toddobaad gudahood iyada oo la imaanaysa fursado ganacsi oo aad u ballaaran, fadhiyo waxbarasho iyo fursadda warshadaha - ugu dambayn - dib isugu xidha. Bandhigga, oo ka dhacaya Nofeembar 9-11 Las Vegas, wuxuu leeyahay astaamo badan oo cusub iyo barnaamij waxbarasho oo si toos ah u qaabeeyey masiibada iyadoo leh fadhiyo ku saabsan sida si wanaagsan loogu dhisi karo mustaqbal ifaya. Dib -u -midaynta warshadaha dhacdooyinka meheradda ayaa lagu wadaa inay noqoto mid gaar ah maadaama IMEX America ay u dabaaldegeyso daabacaaddeeda 10aad iyo sidoo kale guri cusub, Mandalay Bay.
Iibsadayaashu waxay la kulmi karaan alaab -qeybiyeyaasha caalamiga ah ee ku baahsan dhammaan qaybaha warshadaha IMEX America.
Ku dhawaad ​​3,000 oo iibsadeyaal martigaliyay ayaa la xaqiijiyay inay IMEX America u adeegsadaan goob ay ku bilaabaan ganacsiga.
Kooxda IMEX waxay abuureen barnaamij waxbarasho oo dhammaystiran kaas oo iftiiminaya mustaqbalka waaxda iyo sida loo dhiso xagga hore si togan.
Ku dhawaad ​​3,000 oo iibsadeyaal martigeliyey ayaa hadda laga xaqiijiyey guud ahaan Waqooyiga Ameerika iyo adduunka intiisa kale, oo lagu daray boqolaal ka mid ah iibsadayaasha ka soo qeybgalayaashu - oo inta badan ka yimid Mareykanka - dhammaantoodna waxay IMEX America u adeegsanayaan barxad ay ku bilaabaan ganacsiga. Meheraddu waa udub dhexaadka bandhigga iyo iibsadayaashu waxay la kulmi karaan alaab -qeybiyeyaasha caalamiga ah ee ku baahsan dhammaan qaybaha warshadaha.
Kuwaas waxaa ka mid ah meelaha Yurub tagaan Austria, Belgium, Czech Republic, Croatia, France, Germany, Greece, Italy, Ireland, Malta, Netherlands, Portugal, Spain, Switzerland, Scandinavia, iyo UK. Australia, Kuuriya, Japan, New Zealand, iyo Singapore ayaa ka mid ah waddamada Aasiya-Baasifigga ee la xaqiijiyay oo ay weheliyaan Kenya, Morocco, Rwanda, iyo Koonfur Afrika oo ka yimid Afrika. Laga soo bilaabo Atlanta iyo Calgary ilaa LA iyo Vancouver, soo -bandhigayaasha Mareykanka iyo Kanadiyaanka ayaa dhaqan galay. Waxay ku biiraan dalal badan oo Laatiin Ameerika ah oo ay ku jiraan Argentina, Brazil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Mexico, iyo qaar kaloo badan.
Dhammaan magacyada waaweyn ee hudheellada caalamiga ah ayaa ka qaybgalaya oo lagu daray huteelo badan oo yaryar, oo ah kuwa alaab -qeybiyeyaasha teknolojiyadda maalin walba sii kordha. Filo inaad aragto Cvent, EventsAIR, Hopin, Swapcard, RainFocus, iyo MeetingPlay iyo kuwo kale.
Ujeeddo & Wanaagsan
Iyagoo maanka ku haya in xirfadaha xirfaduhu u baahan yihiin cusboonaysiin kadib sanad adag, kooxda IMEX waxay abuureen barnaamij waxbarasho oo dhammaystiran kaas oo iftiiminaya mustaqbalka waaxda iyo sida loo dhiso xagga hore si togan. Barnaamijka barashada bilaashka ah ee IMEX America wuxuu ku bilaabmayaa Smart Monday, oo ay ku shaqeyneyso MPI, Nofeembar 8 oo ay ku jiraan waxbarasho u heellan ururada, shirkadaha iyo xirfadleyda wakaaladda. Waxbarashadu waxay ku sii socotaa aqoon isweydaarsiyo taxane ah, miisas mowduucyo kulul leh iyo siminaaro inta lagu jiro saddexda maalmood ee bandhigga - dhammaantood waxaa loogu talagalay inay wax ka qabtaan qaababka waxbarasho ee kala duwan. Kalfadhiyada waxaa loo habeeyay waddooyin cusub oo cusub, oo ay ku jiraan Hal -abuurka isgaarsiinta, Kala duwanaanshaha iyo helitaanka, Hal -abuurka iyo farsamada; Dib u soo kabashada meheradda, Wada xaajoodyada heshiiska, summadaynta shaqsiyeed, iyo waaritaanka.
Kooxda Hilton waxay ka wada hadlaan dhaqamadii ugu fiicnaa ee ay qaateen sannadkii la soo dhaafay Soo-kabashada Ujeeddada leh-Xalal la taaban karo oo loogu talagalay abuurista iyo hawl-gelinta dhacdooyinka adduunyada aafada ka dib. Marin Bright oo ka socota Kulamada Caqliga leh ayaa wadaagaya '' buugga guusha COVID '' oo ka hadlaya wax soo saarka baahinta, waxyaabaha lagama maarmaanka u ah heshiiska iyo istaraatiijiyadaha isgaarsiinta Xirfadaha dahabka ah: Kulannada casharrada xirfadleyda ee xilligii COVID. Kooxda Maritz waxay sahamin doonaan barashadooda masiibada waxayna si faahfaahsan u bixin doonaan sida bixinta tiknolojiyadda cusub u taageeri karto dhacdooyinka mustaqbalka Carqalad waqtiga soo -kabashada: Maritz wuxuu dib -u -cusboonaysiiyaa waayo -aragnimada dhacdada iyada oo loo marayo tikniyoolajiyad cusub.
Sideen dib ugu qiyaasi karnaa shirarka iyo dhacdooyinka iyada oo loo marayo waaya -aragnimada dalwaddu? Taasi waa su'aasha Derrick Johnson uu ku weydiiyo kalfadhigiisaHawlgalku waa muhiim: Mustaqbalka waaya -aragnimada ee da'da dijitaalka ah oo leh talooyin ku saabsan sida loola hawlgalo dhagaystayaasha "digitally distracted". Isku -darka dhijitaalka iyo muuqaalka ayaa ah diiradda Dhacdooyinka Isku -dhafka ah ee ka gudbaya kala qaybsanaanta waayo -aragnimada jireed iyo dhijitaalka ah. Kalfadhigan, Dax Callner, Agaasimaha Istaraatiijiyadda ee Smyle, wuxuu la wadaagaa fikrado wax ku ool ah oo ku saabsan abuurista waayo -aragnimo la wadaago iyo isku -xirnaanta ka -qaybgalayaasha ku biiraya internetka (URL) iyo goobaha jireed (IRL).
Wadahadallada kala duwanaanta
Waxaa la joogaa waqtigii la ciribtiri lahaa eexda oo la isku duubnaan lahaa kala -duwanaanshaha - iyo warshadaha dhacdooyinka meheraddu waxay ku jiraan meel fiican oo lagu hoggaamiyo tusaale ahaan. Kala duwanaanshuhu, sidaa darteed, waxay udub dhexaad u tahay waxbarashada, dhacdooyinka, iyo astaamaha cusub ee IMEX America.
She Means Business, oo ah dhacdo wadajir ah IMEX iyo majaladda tw, oo ay taageerto MPI, waxay sahamisaa kala duwanaanshaha, sinnaanta jinsiga iyo xoojinta dumarka. Markay timaaddo arrimahan, dumarka iyo raggu inta badan way wada hadlaan, laakiin kuma wada hadlaan. Tan waxaa lagu wadaa inay wax ka beddesho Xulashada Mudanayaasha: Wadahadallada ku saabsan kala duwanaanshaha iyo sinnaanta jinsiga halkaas oo ASAE Michelle Mason iyo lataliyaha Courtney Stanley ay ku casuumaan laba nin wadahadal. Waxa kale oo jirta fursad ah inaad ku biirto kooxaha wada -hadalka yar -yar oo leh haween raad -raac ku ah beertooda. Ashly Balding, Associated Luxury Hotels International; Meg Fasy, DhacdooyinkaGIG; Tracy Stuckrath, baraara! shirarka & dhacdooyinka; Juliet Tripp, Ilaalinta Kiimikada; iyo Human Biography's Nisha Kharé ayaa lagu wadaa inay wadaagaan Casharrada hoggaaminta ee hoggaamiyayaasha haweenka.
Fadhiyada waxbarashada ee sahaminaya qaybaha kale ee kala duwanaanshaha waxaa ka mid ah In la dejiyo dadka naafada ah shirarka iyo dhacdooyinka tooska ah iyo Gelinta shaqada: Kala duwanaanshaha isirka ee warshadaha dhacdooyinka halkaas oo Cheerful Twentyfirst's Elena Clowes ay ku faah -faahinayso natiijooyinka warqadda cilmi -baarista ee hay'adda ee ku saabsan kala duwanaanshaha isirka.
cusub ee IMEX | Dadka EIC & Tuulada Planet Dabaqa bandhiggu wuxuu hormuud u noqon doonaa joogtaynta, kala duwanaanshaha, saamaynta bulshada iyo dib u bixinta. Wada -hawlgalayaasha waxaa ka mid ah LGBTMPA, ECPAT USA, Arrimaha Kala Duwanaanshaha Dalxiiska, Sanduuqa Warshadaha Shirarka, Kulammada Macnaheedu waa Ganacsiga, SEARCH Foundation, Above & Beyond Foundation, iyo Nadiifi Adduunka. Kooxda KHL waxay sidoo kale ku martiqaadeysaa ka -qeybgalayaasha inay dhistaan ​​Clubhouse - meel lagu ciyaaro oo gaar ah oo loogu talagalay cunug jiran iyo asxaabteeda dugsiga.
Dhacdooyinka bulshadu waxay keenaan jahawareer & yaab
In kasta oo bandhiggu uu yahay udub dhexaadka ganacsiga iyo barashada, waxaa sidoo kale jira fursado badan oo lagu xiri karo bannaanka bandhigga. Booqashooyinka Bespoke waxay bixiyaan hoos -u -dhigga Las Vegas haddii ay tahay cuntada ugu fiican, waaya -aragnimada qarsoodiga ah ama waddada gudaheeda laba goobood oo sumcad leh: Qasriga Kaysar iyo Mandalay Bay. Waxa kale oo jira sabab loogu dabbaaldego dhacdooyinka fiidkii Site Nite oo ka dhacaya World Resorts World, MPI Foundation saxeexa dhacdada Rendezvous ee Drais iyo Hoolka Hoggaamiyeyaasha EIC ee MGM Grand.
“Dad badan ayaa IMEX America ugu yeeray 'hoy u noqoshada warshadaha. Anigoo dhowaan ka soo laabtay safar aan ku tagay Las Vegas, waxaan indhahayga ku arkay sida aan si dhow ula shaqeyneyno la-hawlgalayaasheena-oo ay ku jiraan magaalada aan martigalineyno iyo goobta cusub-si aan u soo bandhigno bandhig badbaado leh laakiin sinaba uma dhasho. Ka -qaybgalayaashu waxay filan karaan taabashada caadiga ah ee IMEX ee madadaalada oo qayb ka ah waayo -aragnimada bandhigga, ”Carina Bauer, Maamulaha Guud ee Kooxda IMEX, ayaa soo koobeysa.
IMEX America waxay ka dhici doontaa Nofeembar 9-11 Mandalay Bay ee Las Vegas Smart Isniinta, oo ay ku shaqeyneyso MPI, Nofeembar 8. Si aad isu diiwaangeliso-bilaash-guji halkan. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan fursadaha hoyga iyo si aad u ballansato, guji halkan.